Xasuuqa Rohinga oo saameynta ugu badan ku yeeshay Caruurta. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Xasuuqa Rohinga oo saameynta ugu badan ku yeeshay Caruurta.
Xasuuqa Rohinga oo saameynta ugu badan ku yeeshay Caruurta.
Barakicinta iyo xasuuqa ka dhanka ah muslimiinta Rohinga ee Dalka Maymaar ayaa saameynta ugu badan waxa ay ku yeelatay Caruurta sida ay sheegeyso warbixin ay qortay BBC.
Waxa ay sheegtay Gabar yar oo horteeda lagu gubay hooyadeed iyada oo arkeysa in ay la halgamayaan nolosha iyada iyo inta kale ee kasoo cararay dalkooda.
BBC oo tagtay Xero ay ku jiraan Dadkaasi oo ku taala Dalka bangaladeesh, waxa ay ifisay ama muujisay dhibaatada ay ku sugan yihiin caruurta muslimiinta ah ee Rohinga, kuwaas oo iyaga oo arkaya la gubay guryahooda.
Qaar ka mid ah Caruurta ku jira Xeradaasi ayaa sheegay in hortaada lagu dilay Aabayaashood iyo Hooyooyinkooda, iyaga oo arakaya oo aan waxba ka qaban karin.
Mid ka mid ah Qaxootiga ayaa sheegay in waxa ficilkaas sameynaya ay yihiin Ciidamada Maymaar iyo Maleeshiyada Budistaha kuwaasi oo dilaya islamarkaana gowracaya dhammaan Muslimiinta abriyada ah ee aan waxba galabsan.
Waxa ay intaasi ku dareen “waxaan aheyn mar walba kuwa loola dhaqmo heerka labaad lakiin waxa ay hadda doonayaan in ay na tirtiraan”
Hay’adda UNICEF ee QM ayaa sheegtay in %60 Muslimiinta Rohinga ee bangaladesh ay yihiin Caruur, kuwaasi %30 ka mid ah ay da’dooda ka yar tahay shanta sano.
Tan iyo 25 bisha August Ciidamada Meymaar ayaa kula kacayo xadgudubyo waxuushnimo kula kacayay Muslimiinta Rohinga taasi oo ay keentay dhimashada Kumanaan Qof oo ka mid ah Muslmiinta iyada oo tiro intaasi ka badana ay ku barakaceen.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo faahfaahin dheeri ah ka bixisay qarixii ka dhacay Soobe
Next articleDhalinyaro Soomaaliyeed oo ka qeyb galay Bandhigga Dhiira gelinta Dhalinyarada oo Ruushka ka soconaya